Steppy Pants no simulator mandeha Android tsara indrindra amin'izao fotoana izao | Androidsis
Izahay dia mitady ary mitady singa vaovao izahay amin'ny lalao sy lalao video izay mitarika antsika amin'ny fomba hafa hiatrehana mekanika lalao izay somary hafa noho ireo sehatra ireo, mpihazakazaka tsy misy farany ary sokajy hafa izay mirohondrohona malalaka ao amin'ny Google Play Store. Midika izany fa tena misy ny karazan-tsarimihetsika vaovao na koa, ny lalao indy toa ny Minecraft, dia mahavita mampivondrona mpilalao an-tapitrisany maro hanangana ny tenany ho stardom ary hijanona ao anatin'ny tantaran'ny lalao video. Noho io antony io dia eo am-pitadiavana hatrany io fantsom-bolamena io isika izay hamerina antsika lalao vaovao izay mitondra fomba hafa hifalifaly.
Eto no mandeha ny pataloha Steppy, ny simulator mitaingina zava-misy bebe kokoa ary mampihomehy fa afaka manipy ny tarehinao izao ianao ary ny filalaovany dia hahatonga anao hihomehy tsara. Ity fahalehibiazana amin'ny mekanika ity dia efa nahomby tamin'ny iOS, noho izany amin'ny Android dia tonga amin'ny endrika endrika tsara indrindra izy io ka ahafahan'ny mpilalao an-tapitrisany misintona azy amin'ny herinandro sy volana ho avy. Simulator mandeha an-tongotra izay anaovan'ny fanaovan-gazety fohy kokoa na lava kokoa ilay protagonista mba handrosoana fohy kokoa na lava kokoa handrosoana hatrany. Lalao mahafinaritra sy mahafinaritra izay hahatonga anao tsy hitsahatra hilalao mandra-pandehananao toa ny olona mahazatra.
1 Miakatra tsikelikely hatrany Roma ...
2 Làlan'ny Crossy an-tsary
Miakatra tsikelikely hatrany Roma ...
Ny lalao Steppy Pants dia tena tsotra, fa raha te hahomby dia mila fizika zava-kendrena mba hiditra an-tsehatra ka, raha toa ka tsy vintana ilay protagonista tafintohina amin'ireo lavaka izay sendra azy dia hiafarany miaraka amin'ny taolany eo amorom-by ny hidirany amin'ny tsara. Vita tsara izany ary mihomehy vetivety ilay mpilalao mba hiala voly ary hanomboka ireo dingana ireo izay tsy maintsy raisina am-pilaminana.
Aorian'ny fampianarana kely, izay anondroana antsika ny bokotra fanalahidy lava lasa dingana lava kokoa izy ireo ary ny fohy ho fohy kokoa, ho hitantsika fa manondro ny halavirana izay tsy maintsy tadiavintsika ireo banga mba handraisana tsara ny dingana tsirairay ary manohy mampitombo ny isa toy ny lalao mahazatra hafa izahay.
Làlan'ny Crossy an-tsary
Steppy Pants dia manome isa bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fijerena sary an-dàlana la Crossy Road omeny fikitika tena manokana. Ny mpandraharaha dia afaka nampihatra an'io fiteny cubes io sy loko maro dia maro ka ny lalao tsirairay dia saika miavaka ary ankafizinay ny mahita ny mpandeha an-tongotra manaraka dingana iray hafa.
Raiso ihany koa io lalao io fanaingoana hahazoana akanjo vaovao ho an'ilay mpilalao sarimihetsika; ny tsirairay amin'izy ireo dia azo raisina ihany koa amin'ny alàlan'ny micropayments ary eto no miditra ny dingam-bola. Ny protagonista sariaka dia handray endrika hafa ary hitohy ny fihomehezana rehefa mifehy ireo dingana ireo isika. Lalao video hialana voly ary io no iray amin'ireo tsy miraharaha indrindra hitanay tato ho ato. Fahombiazana lehibe ho an'ireo daty ireo rehefa manana fotoana bebe kokoa hankafizana lalao tsara ianao.
Misy Steppy Pants maimaimpoana avy amin'ny Play Store miaraka amin'ny micropayments ho an'ny fividianana sasany toa ireo voalaza ireo.
Inona no mety ho lasa lalao tena tsotra amin'ny voalohany, raha mahazo avy amin'ny sisin'ny programmer isika, mahazo simulation tsy mora ny mandeha an-tongotra kely ny zavatra azo tanterahina, ka eto dia afaka nikapoka ny fantsika tamin'ny lohany izy. Ny sary dia totohondry lehibe ary ny famolavolana miampy ny zava-bita tsara dia manome kalitao bebe kokoa amin'ny filokana rehetra izay ity lalao video ity. Geniana amin'ny kely.
Ny maha-izy azy
Ny mahafinaritra ny mekanika
Alao ny bateria hivoaka be loatra amin'ny alàlan'ny filalaovana azy 😛
Developer: Fialamboly Super!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny simulator mitaingina zava-misy sy mahafinaritra indrindra dia ny Steppy Pants